A Wanderer's Notebook: အလွန်
Posted by Aung Phyoe at 06:45
ရည်ရွယ်ချက်လေးလည်းကောင်းတယ်.. စိတ်လည်း ရှည်တယ်..။ ပြီးတော့ presentation လှတယ်..
ရှားစပါးစ..စာတိုပေစ ကို လာဖတ် သွားပါကြောင်း..။
:D ဆရာမရော မကေရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒိုင်ခံ အားပေးကြတဲ့အတွက် :)
Very nice post, Aung Phyo!! I juz found out that you got your own blog!! cool boy!! keep it up!! =)
Aung Phyoe yay....it'sanice story...Cheers & keep it up....bro...... ;)
Zin Mon said...
စာမဖတ်ဖြစ်တာတော်တော်ကြာပြီး...ဒီ ၀တ္ထုတို ကတော့ပြန်ဖတ်ဖြစ်တဲ့ပထမဆုံးစာပဲ... ကောင်းပါတယ် keep it up!